ခုရက်ပိုင်း လူငယ် စွန်းဦးတီထွင်စီးပွားရေးပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ameer Rosic ရဲ့ အပြောတွေကို သဘောတွေ့မနောခွေ့ဖြစ်နေတယ်။ သူရဲ့ ဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ဘယ်လိုလှမ်းရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ထားတယ်။ ခံစားကြည့်ရအောင်ပါ။
“ခင်ဗျားတို့ကို ဘဝ အောင်မြင်ရေးနဲ့စပ်လျဉ်းတဲ့ ဖော်မြူလာတစ်ချို့ကို ကျုပ်ပြောပြချင်တယ်။ ဘဝမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရာ ငွေရှိဖို့လိုပါတယ်။ မင်းဘယ်လိုရှာမလဲ ဘယ်လောက် ထိလိုချင်သလဲ? မင်း ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ထိ ဝင်နေသလဲ မင်းစိတ်ကူး ကြည့်စမ်း။ မင်းရဲ့ အချိန်တွေ ခွန်အားနဲ့ဦးနှောက်အရင်အနှီးတွေအားလုံး ဒီလုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ပေးဆပ်ချင်သလည်း ငါ့ကို ပြောစမ်း။ မလိမ်ပါနဲ့။
မင်းလည်း မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြောဖူးပါလိမ့်မယ်။ ငါအရမ်းချမ်းသာချင်တယ် ဒါမှ ငါ့မိသားစု အတွက် ငါကျေးဇူးပြုနိုင်မယ်။ ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ငါလုပ်ပေးနိုင်တာလုပ်ပေးလို့ရမယ်။ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကောင်းပါပြီ … ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ဘဝ အောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ နောက်ကလိုက်ဆိုကြည့်…
Recommended for you - စကားလုံးတွေ သူ့အလုပ်သူလုပ်ပါစေ
step (1) Wake the fuck up မင်းကိုယ်မင်း အရင်နိုးထလိုက်ပါ။
ဘယ်သူကမှ ရော့အင့် ပိုက်ဆံ တစ်ဘီလျံ ရော့အင့် လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု၊ ရောဒီမှာ ချမ်းသာဖို့ ဆေးတစ်ခွက် ဆိုပြီးတော့ မင်းကို အဆင်သင့် လာပေးမယ်တော့ မအောင့်မေ့လိုက်နဲ့။ ဘယ်သူကမှလည်း မင်းကိုယ်လုံး လေးလှအောင်ရော့အင့်၊ မင်းလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရင် အဆင်ပြေစေဆိုပြီး ရော့အင့်ဆိုပြီး လာပေးမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေအားလုံး မင်းလိုချင်ရင် မင်းကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရလိမ့်မယ်။ မင်းအရင်ဆုံး ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းရလိမ့်မယ်။ မင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေမယ် မင်းမကြိုက်ဘူး မင်းထွက်လိုက်။
မင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေမယ် မင်းဘယ်လိုမှ ဆက်လုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး နားလိုက်တော့။ တစ်ချို့လူတွေ မင်းအပေါ် မကောင်းကြဘူး ဘာအားနာနေမလဲ လှစ်ပေါ့။ သွားခွင့်ပေးလိုက်တော့။ မကြိုက်ဘူးမလား ထွက်သွားလိုက် ထွက် ထွက် ထွက် ထွက်… ဘယ်သူကမှ မင်းကို အတင်းကာရော ဆွဲမထားဘူးကွ။
တစ်ရက်တစ်ရက် အဆင်မပြေတာတွေ ငြီးတွားနေတာတွေ၊ ငြီးငြူနေတာတွေ စိတ်ပျက်စရာ စကားလုံး တွေပြောနေတာတွေ အားလုံးရပ်ထားလိုက်တော့။ မင်းကိုယ်တိုင်ကလွဲလို့ဘယ်သူကမှ မင်းကို အမှန် တကယ် မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာ နားလည်ထားလိုက်ဟေ့။
step (2) Invest in yourself မင်းကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရင်နှီးမြှုပ်နှံပါ
အဟမ်း ငါပြောချင်တာက မင်းဘာနဲ့ဘွဲ့ရရ ဘယ်ကျောင်းကပဲ အောင်အောင် ငါလုံးဝ ဂရုမစိုက်ဘူး။ အားလုံး ခုချိန်ကစလို့ခေါက်ထားလိုက်တော့။ ငါလုပ်စေချင်တာတွေက မင်းတစ်နေ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပြီး အောင်ဖတ် Workshop ဆိုတဲ့ ပညာရှင်တွေ ရှင်းပြတဲ့ ဦးဆောင်တဲ့ ဟောပြောပွဲ သင်တန်းတိုတွေတက် မင်းကို အကောင်းဆုံးသင်ပေးမည့် လမ်းညွှန်သူ နည်းပြကောင်းကောင်းတစ်ယောက်ရှာ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို လက်တွေ့သင်ပေးမယ့် ပညာရှင်တွေဆီသွားစေချင်တာ။ ဒါတွေကို မင်းတကယ် လုပ်ချင်ပြီဆိုရင်တော့ မင်းကို ဘယ်အရာကမှ တားဆီးနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
မင်းကိုယ့်ကိုယ် မေးခွန်းတစ်ခွန်းမေးကြည့် နောက်ဆုံးဘယ်တုန်းက အကျိုးရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် လှန်လိုက် သလဲလို ။ ဒီမှာ ပြောမယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုက အောင်လာတဲ့ လူတွေရဲ့ ၇၀% က စာအုပ်တွေ မဖတ်ကြတော့ဘူးတဲ့ဗျာ။ ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလိုက်သလဲ။ မင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ မြှင့်တင်လိုက် မင်းရဲ့ ယုံကြည့်ချက်တွေကို ပြုပြင်လိုက် မင်းရဲ့ သံချေးတက်နေတဲ့ ဦးနှောက်ကို ဆေးကြောလိုက်စမ်းပါ။ မင်းရဲ့ ဒိတ်အောက်နေတဲ ရှေးဟောင်း အတွေးအခေါ်တွေကို ခေါက်ထားလိုက် တော့ကွာ။ ငါကတော့ ငါကို အကြံလာတောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ လူငယ်အဖွဲ့တွေကို ပြောလေ့ရှိတယ်။ မင်းတို့တစ်တွေ Workshop လေးတွေလုပ်ကြပါ။ အနည်းဆုံး တစ်လ တစ်ခါတော့လုပ်ပါပေါ့။ မင်းရဲ့ ခေါင်းထဲကအသိတွေကို အဆင့်မြှင့်ဖို့လိုတယ်။ ဘာမှ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေ လာပေးမနေနဲ့တော့ ဟုတ်ပြီလား။ မင်းကိုယ်မင်းခု အမေရိကန်မှာသဘောထား။ မနက်ဖန် မင်းတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ရောက်ပြီ။ တကယ်နောက်နေ့အင်္ဂလန် သဘက်ခါ သြဇီသွားတယ်ဆိုပါတော့ကွာ။ ဘာတွေ မင်းတွေ့မလဲ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံကြားမှာ မတူညီတဲ့ အတွေးအခေါ်၊ မတူညီတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေ အများကြီးမှ အများကြီး မင်းလေ့လာနိုင်တယ်လေ။
မင်းကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာတွေဟာ ဘယ်နေရာမဆို မင်းယူသွားလို့ ရပြီလေ။ ကမ္ဘာကျော်သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး ဝေါရန့်ဘူဖတ် ကသူ့တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် သူ့ဘဝမှာ အမှန်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ ဘာလည်းဆိုတာ သူအင်တာဗျူး တစ်ခုမှာပြောခဲ့ဖူးတယ်။ သူဟာ ဒေါ်လာ ၅၀၀တန်တဲ့ ဒေးလ်ကာနဂျီရဲ့ သင်တန်းကိုတက်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တာ ခုတော့ သူဟာဘီလျံနာဖြစ်နေပြီ။ ကဲ ဘယ်လောက် လေးစားအံ့သြဖို့ကောင်းလိုက်သလဲ။ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဖို့မသတီဘူးလား မင်းသောက်ရမ်းမတော်လာချင်ဘူးလား။
အေး… မင်းတစ်ခုတော့ သိထားရမယ်။ မင်းစာအုပ်တွေဖတ် အရည်ကျိုသောက်နေရုံနဲ့တော့ဘာမှ ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ မင်းဖတ်ရမယ်၊ သင်ကြားရမယ်၊ လက်တွေ့ဘဝမှာ မင်းအသုံးချရမယ်ကွ။ ဒီမယ် မင်း အူတူတူ အတတတော့ လုပ်မနေနဲ့တော့။ မင်းလူတိုင်းထက် ပိုတော်ရမယ် ထက်မြက်အောင် လုပ်ရမယ်။
မင်းပတ်ဝန်းကျင် လောက ကမ္ဘာကြီးထဲကို နည်းနည်းလေး လေ့လာကြည့်လိုက်။ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ဘီလျံနာကြီးတွေ သူတို့ဘာတွေထူးခြားနေလည်း။ အဖြေကရှင်းရှင်းလေး မင်းတို့ငါတို့ထက်သူတို ပိုပြီး Smart ဖြစ်တယ် ပိုကြိုးစားတယ်လေ။ မင်းတို့ငါတို့မသိသေးတာတွေ သူတို့အများကြီးသိတယ်ကွ။ ဒါဟာဘာကိုပြသလည်းဆိုရင် ငါတို့ကြိုးစားရမယ် အများကြီးလေ့လာရမယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ရင်နှီးမြှုပ်နှံတာတွေ လုပ်ကြရလိမ့်မယ်။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း နောက်နေ့တွေ မရှိသကဲ့သို့ အကောင်းဆုံး မင်းကြိုးစားရမယ်ကွ။
Recommended for you - အောင်မြင်သူနဲ့ ကျရှုံးသူကြားက မတူညီတဲ့အမြင်
မင်းခု ဘယ်လိုလူတွေနဲ့မိတ်ဆွေလုပ်ထားလည်း မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ငါ့ကို ပြစမ်း မင်းရဲ့ ဖြစ်လာမယ့် အနာဂတ်ပုံရိပ်ကို ငါမင်းကိုပြောပြလိုက်မယ်။ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းဟာ ချီးထုတ်တွေ၊ အသုံးမကျတဲ့ကောင် တွေ ၊ငြီးတွားပြီး ဆင်ခြေတွေ ပေးနေတဲ့ ကောင်တွေဆိုရင်မင်းတော့သွားပြီမှတ်။ မင်းလည်း ချီးထုတ်ကောင် ငြီးတွားတဲ့ကောင် ၊ဆင်ခြေဆင်လက်တွေ ပေးဖို့လောက်ပဲသိတဲ့ကောင် ဖြစ်လာမှာပဲ။
မင်း မိတ်ဆွေတွေဟာ တစ်နှစ်ကို ကန်ဒေါ်လာ ငါးသောင်းထိ ရှာနိုင်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ထင်လည်း မင်းလည်း အဲ့ဒီလောက် ရှာနိုင်လာမှာပဲကွ။ ဒီတော့ ငါပြောချင်တာက မင်းရဲ့ အပေါင်းအသင်းဆိုတဲ့ အဝန်းအဝိုင်းကို မင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရလိမ့်မယ်။ ဂျွန်စတီဗင်နဲ့ငါတို့ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ မင်းအပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတွေကို ABC အုပ်စုခွဲပြီး မြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ မင်းသိထားရမှာက မင်းအချိန်ဟာ သိပ်တန်ဖိုးရှိတယ် မင်းရဲ့ စွမ်းအင် တွေဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်။ ဒီတော့မင်းကို အရေမရ အဖတ်မရလာပြောတဲ့ လူတွေနဲ့မင်း အချိန်ဖြုန်းချင် သေးလား။ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလည်းကွာ။ မင်းဘဝကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် A အဆင့် မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲ မင်းအချိန် ကုန်ခံတော့မှာပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ ငါဟာ အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို အတုယူချင်တယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို ငါလေ့လာချင်တယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို ရှာဖွေဆည်းပူး ချင်တယ်လေ။ သူတို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းရောက်အောင်ငါကြိုးစားချင်တယ်။ ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့။
သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတစ်ခုအရဆိုရင် မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကို ပေါင်းလိုက် ဘယ်လောက်ထိ အရည်အသွေးရှိသလည်း ဆင်ခြင်လိုက်။ ပြောချင်တာက မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းလောက်ပဲ မဟုတ်ဘူးနော်။ မင်းဘေးမှာ ဝန်းရံထားတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ မင်းရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး အားလုံး မင်းဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်လာမလည်းဆိုတာကို သူတို့တွေဟာ သွယ်ဝိုက်ပြီးကိုယ်စားပြုနေကြတာပဲလေ။ ဒါကြောင့် မင်းကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်မယ့်သူတွေကို မင်းဆီကနေ ထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်။ မိတ်ဆွေကောင်း တွေ များများရှာ။ ဟုတ်ပြီလား။
မင်းကိုယ်မင်းဘယ် အတိုင်းအတာအထိ သွားမလည်းပေါ်မူတည်ပြီး မင်းရဲ့ Frequency ဆိုတဲ့ပေါက်ရောက် နိုင်မယ့် လိုင်းထဲရောက်အောင် မင်းညှိယူရလိမ့်မယ်။ မင်းခပ်နိမ့်နိမ် လိုင်းထဲမှာနေရင် မင်းဟာ ခပ်ညံ့ညံ့ အတန်းအစားကနေ တက်လာမှာကိုမဟုတ်ဘူးကွ။ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြင့်ဆုံးထိတွန်းတင်ရလိမ့်မယ်။
Recommended for you - ကိုယ်က အရှုံးမပေးမချင်း မရှုံးပါဘူး
step (4) Hunger မင်းဟာ အမြဲတမ်း တွန်းအားတွေပြည့်နေရမယ် အမှန်တကယ် ဘဝတိုးတက်မှုကို အမြဲဆာလောင်နေဖို့လိုမယ်
တစ်ရက် တစ်ရက် မင်းဘဝတိုးတက်ဖို့မင်းဘယ်လောက်ထိ ရင်နှီးမလဲ။ ဘာတွေ လေ့လာမလဲ ဘာတွေ သင်ယူမလဲ။ ငါဆိုလိုချင်တာကတော့ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်တော့မှမလိမ်နဲ့။ မင်းရဲ့ တိုးတက်ခြင်းကို ဆာလောင်မှု အမြဲရှိနေရမယ်။ မင်းကိုယ်မင်း စူပါမင်းလို့စိတ်ထဲ ညွှတ်ယူကြည့်စမ်း မင်းစူပါမင်းလို အားတွေရှိလာမယ်။ မင်းကိုယ်မင်း လက်ဝှေ့အကျော်အမော် မိုက်တိုင်ဆန်လို မြင်ကြည့်လိုက်စမ်း ဘယ်ပြိုင်ဖက်မျိုးမဆို မင်းထိုးသတ်ဖို့ဝန်မလေးတော့ဘူး။
နောက်ဆုံးအဆင့် Step (5) Adaptable သို့မဟုတ် Antifragile (မင်းဘယ်လောက်ခံနိုင်ရည်ရှိမလည်းဆိုတာပဲ)
မင်းဘဝမှာ ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုမှ မင်းတုန်လှုပ်မနေနဲ့။ အသစ်အဆန်းတစ်ခုလုပ်မလား လုပ်လိုက်။ ပညာရပ်တစ်ခု လက်မှုအတတ်ဖြစ်ဖြစ် သင်ဖို့လိုအပ်မလား သင်လိုက်စမ်း။ မင်း ရဲ့ လုပ်ငန်းကြီးကျယ် ဖို့ပိုက်ဆံလိုက်ချေးဖို့လိုမလား မင်းလိုက်ချေးလိုက်။ မင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့တစ်မြို့လုံးပတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်မလား လုပ်လိုက်စမ်း။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းထဲက ပုံပြင်တွေ မင်းတွေ့မယ် အလက်ဇန်းဒါးဘုရင်တို့ ဂျိမ်းမက်ကမ်းတို့လို မင်းကမ္ဘာကြီးကို ကိုင်လှုပ်နိုင်မလား။ ဘယ်လုပ်နိုင်ပါ့မလည်းကွာ။ သူတို့နဲ့မင်းတို့ငါတို့ မတူညီတဲ့ အချက်ဟာ ခံနိုင်ရည် ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာမှာ ကွားခြားသွားတာပဲ။
အဲ့လိုလူမျိုးတွေက စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုခုကြောင့် ဘယ်ယိမ်းမလား ရတယ် ညာယိမ်းမလားရတဲ့လူမျိုးတွေကြီးပဲ ဆိုတာသိထားလိုက်။ မင်းဟာ ရေ လိုကျင့်ရမယ်။ ရေဟာ ဘယ်လို နေရာဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်သလို ပုံသွင်းလို့ရတယ်။ ခံနိုင်ရည်ရှိနေတယ်လေ။ မင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီလား ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ် ပြန်မေးကြည့်လိုက်။ အေး မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ မင်းခုထိ အိပ်ပုပ်ကြီးနေသေးလို့ပဲ။
ကဲ ငါပြောချင်တာ ဒါပဲ။ မင်းဒါတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ် မလဲဆိုတာမူတည်ပြီး မင်းဘဝ ဘယ်လောက်ထိ ပြောင်းလဲ သွားမယ် တိုးတက်သွားမလဲဆိုတာ မင်းသိလာလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမျိုး အောင်မြင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေ ဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဆက်သွယ်ဖို့ ဘာသာစကား၊ စီးပွါးရေးလုပ်ဖို့ LCCI, Account, စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေ၊ နည်းပညာတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ IT နဲ့ပက်သက်တဲ့ သင်တန်းတွေ ဒါတွေလိုအပ်လာပါတယ်။ စုံလင်လှတဲ့ ဘာသာရပ်တွေ သင်ကြားဖို့အတွက် sayar.com.mm မှာ ရှိတဲ့ ဆရာတွေဆီ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး သင့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို မြှင့်တင်ပြီး အောင်မြင်မှုကို ခုပဲ ဆွတ်ခူးလိုက်ပါ။
ဆရာ ဆရာမတွေလည်း အခမဲ့ register လုပ်ထားလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ခုရကျပိုငျး လူငယျ စှနျးဦးတီထှငျစီးပှားရေးပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈတဲ့ Ameer Rosic ရဲ့ အပွောတှကေို သဘောတှမေ့နောခှဖွေ့ဈနတေယျ။ သူရဲ့ ဘဝအောငျမွငျရေးအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ ခွလှေမျးတှေ ဘယျလိုလှမျးရမယျဆိုတာ ကြှနျတျော ဘာသာပွနျထားတယျ။ ခံစားကွညျ့ရအောငျပါ။
“ခငျဗြားတို့ကို ဘဝ အောငျမွငျရေးနဲ့စပျလဉျြးတဲ့ ဖျောမွူလာတဈခြို့ကို ကြုပျပွောပွခငျြတယျ။ ဘဝမှာ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့အရာတှေ အကောငျအထညျဖျောဖို့ရာ ငှရှေိဖို့လိုပါတယျ။ မငျးဘယျလိုရှာမလဲ ဘယျလောကျ ထိလိုခငျြသလဲ? မငျး ဘဏျအကောငျ့ထဲမှာ ဘယျလောကျထိ ဝငျနသေလဲ မငျးစိတျကူး ကွညျ့စမျး။ မငျးရဲ့ အခြိနျတှေ ခှနျအားနဲ့ဦးနှောကျအရငျအနှီးတှအေားလုံး ဒီလုပျငနျးအတှကျ ဘယျလောကျထိ ပေးဆပျခငျြသလညျး ငါ့ကို ပွောစမျး။ မလိမျပါနဲ့။
မငျးလညျး မငျးကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွောဖူးပါလိမျ့မယျ။ ငါအရမျးခမျြးသာခငျြတယျ ဒါမှ ငါ့မိသားစု အတှကျ ငါကြေးဇူးပွုနိုငျမယျ။ ငါ့ပတျဝနျးကငျြအတှကျ ငါလုပျပေးနိုငျတာလုပျပေးလို့ရမယျ။ စသညျဖွငျ့ပေါ့။ ကောငျးပါပွီ … ပထမ အဆငျ့အနနေဲ့ဘဝ အောငျမွငျဖို့အတှကျအရေးအကွီးဆုံးကတော့ နောကျကလိုကျဆိုကွညျ့…
Recommended for you - စကားလုံးတှေ သူ့အလုပျသူလုပျပါစေ
step (1) Wake the fuck up မငျးကိုယျမငျး အရငျနိုးထလိုကျပါ။
ဘယျသူကမှ ရော့အငျ့ ပိုကျဆံ တဈဘီလြံ ရော့အငျ့ လုပျငနျးကွီးတဈခု၊ ရောဒီမှာ ခမျြးသာဖို့ ဆေးတဈခှကျ ဆိုပွီးတော့ မငျးကို အဆငျသငျ့ လာပေးမယျတော့ မအောငျ့မလေို့ကျနဲ့။ ဘယျသူကမှလညျး မငျးကိုယျလုံး လေးလှအောငျရော့အငျ့၊ မငျးလူတှနေဲ့ဆကျဆံရငျ အဆငျပွစေဆေိုပွီး ရော့အငျ့ဆိုပွီး လာပေးမှာတော့ မဟုတျဘူး။ ဒါတှအေားလုံး မငျးလိုခငျြရငျ မငျးကိုယျတိုငျ ဖနျတီးရလိမျ့မယျ။ မငျးအရငျဆုံး ခွလှေမျးတှေ လှမျးရလိမျ့မယျ။ မငျအလုပျတဈခုလုပျနမေယျ မငျးမကွိုကျဘူး မငျးထှကျလိုကျ။
မငျးအလုပျတဈခုလုပျနမေယျ မငျးဘယျလိုမှ ဆကျလုပျခငျြစိတျမရှိတော့ဘူး နားလိုကျတော့။ တဈခြို့လူတှေ မငျးအပျေါ မကောငျးကွဘူး ဘာအားနာနမေလဲ လှဈပေါ့။ သှားခှငျ့ပေးလိုကျတော့။ မကွိုကျဘူးမလား ထှကျသှားလိုကျ ထှကျ ထှကျ ထှကျ ထှကျ… ဘယျသူကမှ မငျးကို အတငျးကာရော ဆှဲမထားဘူးကှ။
တဈရကျတဈရကျ အဆငျမပွတောတှေ ငွီးတှားနတောတှေ၊ ငွီးငွူနတောတှေ စိတျပကျြစရာ စကားလုံး တှပွေောနတောတှေ အားလုံးရပျထားလိုကျတော့။ မငျးကိုယျတိုငျကလှဲလို့ဘယျသူကမှ မငျးကို အမှနျ တကယျ မပွောငျးနိုငျဘူးဆိုတာ နားလညျထားလိုကျဟေ့။
step (2) Invest in yourself မငျးကိုယျတိုငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ရငျနှီးမွှုပျနှံပါ
အဟမျး ငါပွောခငျြတာက မငျးဘာနဲ့ဘှဲ့ရရ ဘယျကြောငျးကပဲ အောငျအောငျ ငါလုံးဝ ဂရုမစိုကျဘူး။ အားလုံး ခုခြိနျကစလို့ခေါကျထားလိုကျတော့။ ငါလုပျစခေငျြတာတှကေ မငျးတဈနေ့ စာအုပျတဈအုပျပွီး အောငျဖတျ Workshop ဆိုတဲ့ ပညာရှငျတှေ ရှငျးပွတဲ့ ဦးဆောငျတဲ့ ဟောပွောပှဲ သငျတနျးတိုတှတေကျ မငျးကို အကောငျးဆုံးသငျပေးမညျ့ လမျးညှနျသူ နညျးပွကောငျးကောငျးတဈယောကျရှာ စာအုပျထဲက အကွောငျးအရာတှကေို လကျတှသေ့ငျပေးမယျ့ ပညာရှငျတှဆေီသှားစခေငျြတာ။ ဒါတှကေို မငျးတကယျ လုပျခငျြပွီဆိုရငျတော့ မငျးကို ဘယျအရာကမှ တားဆီးနိုငျမှာ မဟုတျတော့ဘူး။
မငျးကိုယျ့ကိုယျ မေးခှနျးတဈခှနျးမေးကွညျ့ နောကျဆုံးဘယျတုနျးက အကြိုးရှိတဲ့ စာအုပျတဈအုပျ လှနျလိုကျ သလဲလို ။ ဒီမှာ ပွောမယျ။ လလေ့ာခကျြတှအေရ တက်ကသိုလျတဈခုခုက အောငျလာတဲ့ လူတှရေဲ့ ရ၀% က စာအုပျတှေ မဖတျကွတော့ဘူးတဲ့ဗြာ။ ဘယျလောကျစိတျပကျြဖို့ကောငျးလိုကျသလဲ။ မငျးရဲ့ စိတျဓာတျတှေ မွှငျ့တငျလိုကျ မငျးရဲ့ ယုံကွညျ့ခကျြတှကေို ပွုပွငျလိုကျ မငျးရဲ့ သံခြေးတကျနတေဲ့ ဦးနှောကျကို ဆေးကွောလိုကျစမျးပါ။ မငျးရဲ့ ဒိတျအောကျနတေဲ ရှေးဟောငျး အတှေးအချေါတှကေို ခေါကျထားလိုကျ တော့ကှာ။ ငါကတော့ ငါကို အကွံလာတောငျးတဲ့ ကုမ်ပဏီတှေ လူငယျအဖှဲ့တှကေို ပွောလရှေိ့တယျ။ မငျးတို့တဈတှေ Workshop လေးတှလေုပျကွပါ။ အနညျးဆုံး တဈလ တဈခါတော့လုပျပါပေါ့။ မငျးရဲ့ ခေါငျးထဲကအသိတှကေို အဆငျ့မွှငျ့ဖို့လိုတယျ။ ဘာမှ ဆငျခွဆေငျလကျတှေ လာပေးမနနေဲ့တော့ ဟုတျပွီလား။ မငျးကိုယျမငျးခု အမရေိကနျမှာသဘောထား။ မနကျဖနျ မငျးတရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ ရောကျပွီ။ တကယျနောကျနအေ့င်ျဂလနျ သဘကျခါ သွဇီသှားတယျဆိုပါတော့ကှာ။ ဘာတှေ မငျးတှမေ့လဲ တဈနိုငျငံနဲ့တဈနိုငျငံကွားမှာ မတူညီတဲ့ အတှေးအချေါ၊ မတူညီတဲ့ စီးပှားရေးလုပျဆောငျခကျြတှေ အမြားကွီးမှ အမြားကွီး မငျးလလေ့ာနိုငျတယျလေ။
မငျးကိုယျ့ခေါငျးထဲမှာ ကိုယျတိုငျရငျးနှီးမွှုပျနှံထားတာတှဟော ဘယျနရောမဆို မငျးယူသှားလို့ ရပွီလေ။ ကမ်ဘာကြျောသနျးကွှယျသူဌေးကွီး ဝေါရနျ့ဘူဖတျ ကသူ့တဈသကျနဲ့တဈကိုယျ သူ့ဘဝမှာ အမှနျဆုံးနဲ့ အကောငျးဆုံး ရငျနှီးမွှုပျနှံမှုဟာ ဘာလညျးဆိုတာ သူအငျတာဗြူး တဈခုမှာပွောခဲ့ဖူးတယျ။ သူဟာ ဒျေါလာ ၅၀၀တနျတဲ့ ဒေးလျကာနဂြီရဲ့ သငျတနျးကိုတကျပွီး ရငျးနှီးမွှုပျနှံလိုကျတာ ခုတော့ သူဟာဘီလြံနာဖွဈနပွေီ။ ကဲ ဘယျလောကျ လေးစားအံ့သွဖို့ကောငျးလိုကျသလဲ။ မငျးကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံ ဖို့မသတီဘူးလား မငျးသောကျရမျးမတျောလာခငျြဘူးလား။
အေး… မငျးတဈခုတော့ သိထားရမယျ။ မငျးစာအုပျတှဖေတျ အရညျကြိုသောကျနရေုံနဲ့တော့ဘာမှ ဖွဈလာမှာတော့မဟုတျဘူး။ မငျးဖတျရမယျ၊ သငျကွားရမယျ၊ လကျတှဘေ့ဝမှာ မငျးအသုံးခရြမယျကှ။ ဒီမယျ မငျး အူတူတူ အတတတော့ လုပျမနနေဲ့တော့။ မငျးလူတိုငျးထကျ ပိုတျောရမယျ ထကျမွကျအောငျ လုပျရမယျ။
မငျးပတျဝနျးကငျြ လောက ကမ်ဘာကွီးထဲကို နညျးနညျးလေး လလေ့ာကွညျ့လိုကျ။ ခေါငျးဆောငျကွီးတှေ ဘီလြံနာကွီးတှေ သူတို့ဘာတှထေူးခွားနလေညျး။ အဖွကေရှငျးရှငျးလေး မငျးတို့ငါတို့ထကျသူတို ပိုပွီး Smart ဖွဈတယျ ပိုကွိုးစားတယျလေ။ မငျးတို့ငါတို့မသိသေးတာတှေ သူတို့အမြားကွီးသိတယျကှ။ ဒါဟာဘာကိုပွသလညျးဆိုရငျ ငါတို့ကွိုးစားရမယျ အမြားကွီးလလေ့ာရမယျ။ ကိုယျ့ဖာသာကိုယျ ရငျနှီးမွှုပျနှံတာတှေ လုပျကွရလိမျ့မယျ။ နတေို့ငျးနတေို့ငျး နောကျနတှေ့ေ မရှိသကဲ့သို့ အကောငျးဆုံး မငျးကွိုးစားရမယျကှ။
Recommended for you - အောငျမွငျသူနဲ့ ကရြှုံးသူကွားက မတူညီတဲ့အမွငျ
step (3) Friends မိတျဆှေ အပေါငျးအသငျးတှေ
မငျးခု ဘယျလိုလူတှနေဲ့မိတျဆှလေုပျထားလညျး မငျးရဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ငါ့ကို ပွစမျး မငျးရဲ့ ဖွဈလာမယျ့ အနာဂတျပုံရိပျကို ငါမငျးကိုပွောပွလိုကျမယျ။ မငျးရဲ့သူငယျခငျြးဟာ ခြီးထုတျတှေ၊ အသုံးမကတြဲ့ကောငျ တှေ ၊ငွီးတှားပွီး ဆငျခွတှေေ ပေးနတေဲ့ ကောငျတှဆေိုရငျမငျးတော့သှားပွီမှတျ။ မငျးလညျး ခြီးထုတျကောငျ ငွီးတှားတဲ့ကောငျ ၊ဆငျခွဆေငျလကျတှေ ပေးဖို့လောကျပဲသိတဲ့ကောငျ ဖွဈလာမှာပဲ။
မငျး မိတျဆှတှေဟော တဈနှဈကို ကနျဒျေါလာ ငါးသောငျးထိ ရှာနိုငျရငျ ဘာဖွဈမယျထငျလညျး မငျးလညျး အဲ့ဒီလောကျ ရှာနိုငျလာမှာပဲကှ။ ဒီတော့ ငါပွောခငျြတာက မငျးရဲ့ အပေါငျးအသငျးဆိုတဲ့ အဝနျးအဝိုငျးကို မငျးအဆငျ့မွှငျ့တငျရလိမျ့မယျ။ ဂြှနျစတီဗငျနဲ့ငါတို့ပွောခဲ့ဖူးတယျ။ မငျးအပေါငျးအသငျး မိတျဆှတှေကေို ABC အုပျစုခှဲပွီး မွငျကွညျ့လိုကျပါ။ မငျးသိထားရမှာက မငျးအခြိနျဟာ သိပျတနျဖိုးရှိတယျ မငျးရဲ့ စှမျးအငျ တှဟော တနျဖိုးရှိတယျ။ ဒီတော့မငျးကို အရမေရ အဖတျမရလာပွောတဲ့ လူတှနေဲ့မငျး အခြိနျဖွုနျးခငျြ သေးလား။ ဘယျဟုတျပါ့မလညျးကှာ။ မငျးဘဝကို မွှငျ့တငျပေးမယျ့ A အဆငျ့ မိတျဆှတှေနေဲ့ပဲ မငျးအခြိနျ ကုနျခံတော့မှာပေါ့။
ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုရငျတော့ ငါဟာ အဲ့ဒီလူတှရေဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို အတုယူခငျြတယျ။ သူတို့ရဲ့လုပျပုံကိုငျပုံတှကေို ငါလလေ့ာခငျြတယျ။ သူတို့ပွောတဲ့ ဗဟုသုတတှကေို ရှာဖှဆေညျးပူး ခငျြတယျလေ။ သူတို့ရဲ့ အဆငျ့အတနျးရောကျအောငျငါကွိုးစားခငျြတယျ။ ဒီလိုပဲ ဖွဈရမှာပေါ့။
သိပ်ပံနညျးကလြလေ့ာမှုတဈခုအရဆိုရငျ မငျးရဲ့သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးမိတျဆှတှေကေို ပေါငျးလိုကျ ဘယျလောကျထိ အရညျအသှေးရှိသလညျး ဆငျခွငျလိုကျ။ ပွောခငျြတာက မငျးရဲ့ သူငယျခငျြးလောကျပဲ မဟုတျဘူးနျော။ မငျးဘေးမှာ ဝနျးရံထားတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ မငျးရဲ့ မိသားစုဝငျတှေ အားလုံး အားလုံး မငျးဟာ ဘယျလိုလူမြိုးဖွဈလာမလညျးဆိုတာကို သူတို့တှဟော သှယျဝိုကျပွီးကိုယျစားပွုနကွေတာပဲလေ။ ဒါကွောငျ့ မငျးကို ဖကျြလိုဖကျြဆီးလုပျမယျ့သူတှကေို မငျးဆီကနေ ထှကျခှာခှငျ့ပေးလိုကျ။ မိတျဆှကေောငျး တှေ မြားမြားရှာ။ ဟုတျပွီလား။
မငျးကိုယျမငျးဘယျ အတိုငျးအတာအထိ သှားမလညျးပျေါမူတညျပွီး မငျးရဲ့ Frequency ဆိုတဲ့ပေါကျရောကျ နိုငျမယျ့ လိုငျးထဲရောကျအောငျ မငျးညှိယူရလိမျ့မယျ။ မငျးခပျနိမျ့နိမျ လိုငျးထဲမှာနရေငျ မငျးဟာ ခပျညံ့ညံ့ အတနျးအစားကနေ တကျလာမှာကိုမဟုတျဘူးကှ။ မငျးကိုယျ့ကိုယျကို အမွငျ့ဆုံးထိတှနျးတငျရလိမျ့မယျ။
Recommended for you - ကိုယျက အရှုံးမပေးမခငျြး မရှုံးပါဘူး
step (4) Hunger မငျးဟာ အမွဲတမျး တှနျးအားတှပွေညျ့နရေမယျ အမှနျတကယျ ဘဝတိုးတကျမှုကို အမွဲဆာလောငျနဖေို့လိုမယျ
တဈရကျ တဈရကျ မငျးဘဝတိုးတကျဖို့မငျးဘယျလောကျထိ ရငျနှီးမလဲ။ ဘာတှေ လလေ့ာမလဲ ဘာတှေ သငျယူမလဲ။ ငါဆိုလိုခငျြတာကတော့ မငျးကိုယျ့ကိုယျကို ဘယျတော့မှမလိမျနဲ့။ မငျးရဲ့ တိုးတကျခွငျးကို ဆာလောငျမှု အမွဲရှိနရေမယျ။ မငျးကိုယျမငျး စူပါမငျးလို့စိတျထဲ ညှတျယူကွညျ့စမျး မငျးစူပါမငျးလို အားတှရှေိလာမယျ။ မငျးကိုယျမငျး လကျဝှအေ့ကြျောအမျော မိုကျတိုငျဆနျလို မွငျကွညျ့လိုကျစမျး ဘယျပွိုငျဖကျမြိုးမဆို မငျးထိုးသတျဖို့ဝနျမလေးတော့ဘူး။
နောကျဆုံးအဆငျ့ Step (5) Adaptable သို့မဟုတျ Antifragile (မငျးဘယျလောကျခံနိုငျရညျရှိမလညျးဆိုတာပဲ)
မငျးဘဝမှာ ဘယျလိုစိနျချေါမှုမြိုးကိုမှ မငျးတုနျလှုပျမနနေဲ့။ အသဈအဆနျးတဈခုလုပျမလား လုပျလိုကျ။ ပညာရပျတဈခု လကျမှုအတတျဖွဈဖွဈ သငျဖို့လိုအပျမလား သငျလိုကျစမျး။ မငျး ရဲ့ လုပျငနျးကွီးကယျြ ဖို့ပိုကျဆံလိုကျခြေးဖို့လိုမလား မငျးလိုကျခြေးလိုကျ။ မငျးလုပျငနျးတိုးတကျဖို့တဈမွို့လုံးပတျပွီး အလုပျလုပျဖို့ လိုအပျမလား လုပျလိုကျစမျး။ ကမ်ဘာ့သမိုငျးထဲက ပုံပွငျတှေ မငျးတှမေ့ယျ အလကျဇနျးဒါးဘုရငျတို့ ဂြိမျးမကျကမျးတို့လို မငျးကမ်ဘာကွီးကို ကိုငျလှုပျနိုငျမလား။ ဘယျလုပျနိုငျပါ့မလညျးကှာ။ သူတို့နဲ့မငျးတို့ငါတို့ မတူညီတဲ့ အခကျြဟာ ခံနိုငျရညျ ဘယျလောကျရှိသလဲဆိုတာမှာ ကှားခွားသှားတာပဲ။
အဲ့လိုလူမြိုးတှကေ စိနျချေါမှုတဈခုခုကွောငျ့ ဘယျယိမျးမလား ရတယျ ညာယိမျးမလားရတဲ့လူမြိုးတှကွေီးပဲ ဆိုတာသိထားလိုကျ။ မငျးဟာ ရေ လိုကငျြ့ရမယျ။ ရဟော ဘယျလို နရောဖွဈဖွဈ လိုအပျသလို ပုံသှငျးလို့ရတယျ။ ခံနိုငျရညျရှိနတေယျလေ။ မငျးခံနိုငျရညျရှိပွီလား ဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျ ပွနျမေးကွညျ့လိုကျ။ အေး မရှိသေးဘူးဆိုရငျတော့ မငျးခုထိ အိပျပုပျကွီးနသေေးလို့ပဲ။
ဒီလိုမြိုး အောငျမွငျမှုတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့အရညျအခငျြးတှေ ဖွညျ့ဖို့လိုပါတယျ။ ဆကျသှယျဖို့ ဘာသာစကား၊ စီးပှါးရေးလုပျဖို့ LCCI, Account, စတဲ့ ဘာသာရပျတှေ၊ နညျးပညာတိုးတကျနတေဲ့ ခတျေကွီးမှာ IT နဲ့ပကျသကျတဲ့ သငျတနျးတှေ ဒါတှလေိုအပျလာပါတယျ။ စုံလငျလှတဲ့ ဘာသာရပျတှေ သငျကွားဖို့အတှကျ sayar.com.mm မှာ ရှိတဲ့ ဆရာတှဆေီ တိုကျရိုကျဆကျသှယျပွီး သငျ့ရဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို မွှငျ့တငျပွီး အောငျမွငျမှုကို ခုပဲ ဆှတျခူးလိုကျပါ။
ဆရာ ဆရာမတှလေညျး အခမဲ့ register လုပျထားလို့ ရပါတယျခငျဗြာ။
Read 2085 times Last modified on Thursday, 21 December 2017 17:53